Wildshade: hazakazaka soavaly fantasy – mangalatra&Hack – Torohevitra Android Cheats
ny Editor | Novambra 30, 2021
Efa naheno momba ny soavaly Wildshade ve ianao? Ampio ny soavaly nofinofinao amin'ny over 40 safidy an-tapitrisany, ampio ny soavaly tsirairay amin'ny tack mifanentana, ary porofoy fa mendrika ny andiana Wildshade angano ianao. Mandresy hazakazaka soavaly mahagaga amin'ny lalao mahafinaritra, tontolo feno aventure!
Fahiny, indray mandeha isan-taona akaikin'ny tanànan'i Wildshade, nisy zavatra mahagaga nitranga. Nisy avana nameno ny lanitra, famantarana fa niverina ny soavalin'i Wildshade! Tsy nisy nahalala hoe avy aiza izy ireo na aiza no hiverenany. Ny zavatra iray fantatr’izy ireo anefa dia ny hoe nirehareha ireo soavaly, Nahery Fo, ary mendrika ny hohajaina. Nitangorona nanao hazakazaka ny mponina, samy mifidy ny mpitaingina azy avy. Vao nitaingina soavaly izy ireo dia nahatsiaro malalaka ny mpitaingina tsirairay, resy.
Ary avy eo, loza nitranga: nirehitra ny tanàna sy ny manodidina, tsy voasakana ny lelafo. Tsy niverina intsony ireo soavaly Wildshade. Naorina indray ny tanàna ary niverina ny olona, sitrana ny tany, nefa tsy nisy famantarana ny soavaly.
Nanao hazakazaka soavaly ny olona tao an-tanàna ho fahatsiarovana an’ireo bibidia tsara tarehy ireo, miezaka ny mamerina indray ireo fotoana mahagaga tamin'ny lasa izay nisehoan'ny soavaly ary nanomboka ny hazakaza-dia.
Ary izao ianao, koa afaka mahatsapa ny ody ny Wildshade soavaly, misaotra an'i Wildshade ny lalao. Be dia be ny hazakazaka soavaly dia tsara tarehy, soavaly mahafinaritra miandry ny hihaona aminao!
– Betsaka ny tontolo vaovao ho hita
– Mianara fahaiza-manao vaovao rehefa mikaroka hazakazaka mampientam-po ianao
– Ampitomboy ny fahaizanao amin'ny hazakazaka tsirairay rehefa mahita safidy vaovao ianao
– Mamorona soavaly tonga lafatra amin'ny safidy an-tapitrisany
– Samy manana ny toetrany ny soavaly tsirairay
– Ny soavaly tsirairay dia miavaka
– Andramo ny tack ho an'ny soavalinao
– Fidio ny laselin'izy ireo, lamboridy, bodofotsy, hairstyle, loko volo
– Manapaha hevitra izay fitaovana ilainao hazakazaka
– Fidio ny endriky ny toetranao
– Omeo anarana ny toetranao
– Mifidiana iray amin'ireo mpitaingina valo samihafa
← Bubble Breaker - Tanjona ny handresy – mangalatra&Hack Lalao Rocket League Sideswipe – mangalatra&Hack →
Turbo Bike: Extreme Racing – mangalatra&Hack